Ring Up Tech - If you forgot your Apple ID password
Apple ID Password မေ့လေလျှင်
" မေ့လေလျှင် " ဆိုတော့ မမေ့အောင် ဘယ်လိုကြံဆောင်ရမလဲအရင် စလိုက်ကြရအောင်။ အကြောင်းကတော့ ယခု ဒီစာဖတ်နေသူက Password လက်တလောမေ့သူမဟုတ်လောက်လို့ပါဗျ။
Password မေ့တဲ့အကျင့်သည် Password ခဏခဏပြောင်းလို့ဖြစ်စေ၊ စထည့်တဲ့အချိန်မှာ အလွယ်တကူစိတ်ထဲရှိတာထည့်လို့ဖြစ်စေ မေ့လွယ်ပါတယ်၊ Face Lock နဲ့သုံးနေပြီး Password မရိုက်တာကြာလို့ဖြစ်စေ မေ့တတ်ကြပါတယ်။
Password ကို အမြဲတမ်းမပြောင်းဘဲထားခြင်းသည်မလည်းမကောင်းသလို ခဏခဏပြောင်းနေခြင်းသည်လည်း သိပ်မသင့်တော်လှပါ။ ဒါကြောင့် Password ကို တစ်ခုခုသံသယဖြစ်တဲ့အချိန်၊ မလုံခြုံတော့ဘူးဟု ခံစားမိတဲ့အချိန်ကြမှသာပြောင်းပါ။
စထည့်တဲ့အချိန်မှာရောက်တက်ရာရာထည့်မိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ ရည်ရှည်မှာ အမှားအယွင်းဖြစ်ဖို့ အများဆုံးပါပဲ။ Password ထည့်ဖို့အတွက် ကိုယ်ပိုင် Formula တစ်ခုဆန်ဆန် စိတ်ထဲတွင်သတ်မှတ်ပါ။ အများမသိပါစေနဲ့။ ကိုယ်ပိုင်သင်္ကေတတွေအဖြစ် သတ်သတ်မှတ်မှတ်ထားပါ။ !, @, #, $, % စတဲ့ အမှတ်အသားတွေကို သင့်တော်ရာ စာလုံး အလယ်၊ အရှေ့၊ အနောက် စတာတွေမှာ ထည့်တာမျိုးသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Password ရဲ့ ဘယ်နှစ်လုံးမြောက်မှာ ထည့်မယ်ဆိုတာမျိုးလည်း သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ မွေးနှစ်ကို အနောက်ဆုံးမှာထည့်တတ်ကြတာမျိုးဟာ အလွန်ရိုးရှင်းပြီး မှန်းဆရလွယ်စေပါတယ်။ နာမည်ရဲ့ ဘယ်နှစ်လုံးမြောက်မှာ ဖောက်ထည့်မယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ဖြစ် သတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။
လက်ရှိမိမိသုံးနေတဲ့ Password ကို မမေ့အောင် မကြခဏရိုက်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
Two-factor authentication ထည့်ထားပါ မိမိပင်တိုင်သုံးတဲ့ဖုန်းနှစ်လုံးလောက်ကို Verify လုပ်ပြီး Two-factor authentication ထည့်ထားခြင်းဖြင့် ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိသလို Password မေ့တဲ့အခါမှာလည်း လွယ်ကူစွာ မိနစ်ပိုင်းအတွင် Password. အသစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
မေ့သွားသော Password အား Reset ချနည်း
ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် Reset ချခြင်း
https://iforgot.apple.com/password/verify/appleid?language=en_US ယခုလင့်ကနေ သွားပြီး Apple ID ကိုအရင်ရိုက်ပါ။
ပြီးလျှင် Two-factor ခံထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပါ။
Continue ဆက်နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုလျှင် ဖုန်းကို Code ခြောက်လုံးပို့ပေးပါပြီ။ ထိုခြောက်လုံးကို ပြန်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်လျှင် Password အသစ်ထည့်လို့ရပါပြီ။
Email ဖြင့် Reset ချခြင်း
Two-Factor (Two-Step verification) မခံထားဘူးဆိုလျှင် email ကို Reset Link ပေးပို့ပြီးလည်း ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
Email ကိုဝင်လာတဲ့ Reset Link ကို နှိပ်ပြီး Password. အသစ်ရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။
Security Question ဖြင့် Reset ချခြင်း
Two-factor မခံထားလို့ဖြစ်စေ၊ E-mail ကိုလည်း သုံးလို့မရလို့ဖြစ်စေဆိုလျှင် ID ဖွင့်တုန်းက ပေးခဲ့သည့် မွေးနေ့နှင့် Security Question များအားဖြေပြီးလည်း Password အား အသစ်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
အရေးထားမှတ်သားရန် >> Password ကို ဖုန်းထဲက Photo ထဲမှာဖြစ်စေ၊ Note ထဲမှာဖြစ်စေ မမှတ်ပါနှင့်။ ဖုန်း ပျောက်သည့်အခါ Password. ပါ မေ့သွားတတ်ကြလို့ပါ။ Verify Number ထည့်သည့်အခါ ပင်တိုင်သုံးသည့် နံပါတ် နှစ်လုံးအထိ ထည့်ပါ။ ဖုန်း ပျောက်လို့ Sim card ပါသွားသည့်တိုင် ဖုန်းနှစ်လုံးထည့်ထားတာကြောင့် နောက်တစ်လုံးနဲ့ Verify. လုပ်ပြီး iCloud ဝင်လို့ဖြစ်စေ Lost Mode. ချနိုင်တာကြောင့်ပါ။